တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် တိုင်းရင်းဆေးမိသားစု၏ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ Welcome to University of Traditional Medicine(UTM), Mandalay .This web site is launched on 11.11.2019.( ၁၃၈၁ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ တွင်လွှင့်တင်သည်။)
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် တိုင်းရင်းဆေးမိသားစု၏ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇)ရက်၊ သောကြာနေ့
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရှစ်မျက်နှာဘုရား ပရဝဏ်၌ ယနေ့ (၇-၂-၂၀၂၀)ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီမှ စတင်ကာ Medical Education Unit မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော Personal and Professional Development Progamme (PPDP)၏ အစီအစဉ်ဖြင့် နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော တိုင်းရင်းဆေး မိသားစု ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ခေတ္တပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသိန်းဇော်လင်း၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (စီမံ) ဦးဝင်းဟန်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြား) ဦးဝင်းစိုး၊ ပါမောက္ခ ဌာနမှူး၊ ဌာနတာဝန်ခံများနှင့် ဆရာ ဆရာမများအားလုံး၊ မန္တလေး သင်ကြားရေး တိုင်းရင်းဆေးရုံမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဉီးစန်းလွင်နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ မန္တလေး တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံမှ ဝန်ထမ်းများ၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေသော အလုပ်သင်ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် အတန်းစုံမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဤအခမ်းအနားတွင် သဘာပတိအဖြစ် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ ခေတ္တပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သိန်းဇော်လင်းက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ Presenter အဖြစ် ဦးမြင့်အေး (လက်​ထောက် ကထိက၊ ဓာတုဗေဒဌာန)က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အမှတ်ပေးဒိုင်များအဖြစ် ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့် ဌာနမှူးများက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ အတန်းအသီးသီးမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဆေးရုံမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဆေးဝါးစက်ရုံမှ ဝန်ထမ်းများ တပြိုင်နက် တပျော်တပါး ယှဥ်ပြိုင်ကြသည်။
ဆုပေးပွဲတွင် အမှတ်အများဆုံး အစဥ်လိုက်ရရှိသည့် အသင်းများကို ကြေငြာကာ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု၊ စတုတ္ထဆု၊ ပဉ္စမဆု၊ ဆဌမဆု၊ သတ္တမဆုနှင့် အဋ္ဌမဆုများအထိ သတ်မှတ်၍ ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီး တပျော်တပါး ထမနဲ စားကြရင်း အခမ်းအနားကို မွန်းလွဲ ၃:၄၅ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
The 10th Traditional Medicine Research Congress. ဒသမအကြိမ်၊ တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ
Date 02.26.2020 9:00 am - 02.27.2020 4:00 pm
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဒသမအကြိမ် တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို QR code မှ တဆင့် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ခြင်း	26 February 2020
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား	26 February 2020
Agenda of TM research Congress	26 February 2020
The 10th Traditional Medicine Research Congress ဒသမအကြိမ်၊ တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ အတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ	26 February 2020
မန္တလေးမြို့၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား ကျင်းပ	26 February 2020